That's so good, right?: Forced by classmate, Pride busted
စာအုပ်ကိုပစ်ချလိုက်လို့ လန့်သွားတာလား သိပ်မလန့်နဲ့ သူငယ်ချင်း ဒီငနဲကို သူကျောင်းစတက်ကတည်းက မုန်းနေခဲ့တာ။ သူက တော်တော်စိတ်ကြီးဝင်နေတဲ့ကောင်ပါ…တပါးသူတွေ အမြဲပျော်ရွှင်အောင် သူစွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းအမြဲပြဖို့ကြိုးစားတယ်….ပြီးတော့ သူ့ကိုယ်သူ အရာရာမှာ အလွန် smart ကျကြောင်းပြဖို့အမြဲကြိုးစားနေတဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်ဗျ။ ဘာမဟုတ်တဲ့ အကြောင်းအရာလေး နည်းနည်းနဲ့ သူနဲ့ကျွန်တော် အနည်းဆုံး သုံးလေးကြိမ်လောက်တော့ ဖိုက်တင် play လုနီးနီးဖြစ်ဖူးတယ်။ တစ်ပါးသူရဲ့ အားကိုး အားထားပြုနိုင်သူဖြစ်ဖို့လည်း သူကြိုးစားတတ်တာပေါ့။ တခြားသူတွေ သူ့ပြဿနာနဲ့သူရှိတတ်ကြတာ လူတိုင်းသိပေမယ့် ဘာကြောင့်မှန်းလည်းမသိ သူက တစ်ယောက်ယောက်ထက် ကျွန်တော့်ကို ပိုမိုချိန်ရွယ်နေသလားလို့။
သူ့နာမည်က ဆန်းမင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လနှစ်လလောက်ကမှပြောင်းလာတာ။ သူ့စရိုက်နဲ့သူ့ ခန္ဓာကိုယ်က လိုက်ပါတယ် ထွားကြိုင်းသန်မာသူပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းစာမှာတော့ သိပ်စိတ်မ၀င်စားတာလားဘာလားမသိ စာမေးပွဲ နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်ကျတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ထက်စာရင်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကြီးတယ်လို့ သတင်းရပါတယ်။ ရိုးရိုးသားသား ပြောရရင် သူနဲ့ ဖိုက်ရမှာ လန့်ပါတယ်ဗျ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က ပေါင် ၁၂၀လောက်သာရှိပြီး ဖြူဖြူသွယ်သွယ်မို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ အခြေအနေအရ မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်ဖြစ်နေတော့တာ။
တစ်ရက် ကျွန်တော်စာသင်ခန်းထဲလှမ်းအ၀င် သူက စသလိုလိုနဲ့နောက်ကတွန်းလိုက်တာ ဟန်ချက်ပျက်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်လဲရော။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကလည်း ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ သူ့ကိုချက်ချင်းဆိုသလို တုန့်ပြန်အော်ဟစ်လိုက်မိပါတယ်။ `တောက်..´ ကျွန်တော် နှုတ်ထွက်ကြမ်းသွားမှန်းတော့သိပါတယ် သူဒီလောက်ထိ စိတ်ဆိုးသွားလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော့် ပခုံးကို ကိုင်ပြီး နံရံရှိရာဆီ သူအားကြီးနဲ့တွန်းကပ်လိုက်တာများ ကျွန်တော့်ကျောပြင်နဲ့နံရံ တသားတည်းလိုလိုဖြစ်သွားရသလို ထွားကြိုင်းလှတဲ့ သူ့ရင်အုပ်တွေကလည်း ကျွန်တော့်အနားကပ်ကာ ဖားဖိုဆွဲလို့ပါ။ အဲ….ဆရာ အတန်းထဲဝင်လာတော့မှ သူ့လက်တွေရုပ်သိမ်းသွားပြီး ဒေါသတွေလျှော့သွားတယ် ကျွန်တော်တို့ပြဿနာပိုမဖြစ်ချင်ကြဘူးမဟုတ်လား။ သူ ကျွန်တော့်အနားကပ်ပြီး ခပ်တိုးတိုးပြောသွားသေး တယ် `မင်းနဲ့ပြီးမှတွေ့ကြတာပေါ့´တဲ့။
အဲ့ဒီနေ့ကစပြီး အတန်းထဲမှာ ဆရာမရှိဘူးဆိုပါက အတန်းသားအားလုံးရှေ့မှာ စနောက်တော့တာပါပဲ မထိတထိပေါ့။ သူ ကျွန်တော့်ကို ခေါ်နေကြစကားလုံးတွေကတော့ ``ငပိန်…..အရိုးခြောက်´´ ``မိန်းမလျှာ…ဂန်ဒူး´´ စသဖြင့်ပေါ့။ တစ်ရက်တော့ သူ ကျွန်တော့်ကို တမင်နှောင်ယှက်တာမျိုးဖြစ်ရပ်တစ်ခုကြောင့် ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက တော်တော်ဆိုးတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ တုန့်ပြန်ပြောဆိုပစ်လိုက် မိတယ်။ အတန်းသူ အတန်းသားတွေအားလုံးနီးပါးက ကျွန်တော့်ဘက်ကထောက်ခံတဲ့အနေအထားမျိုးလေ …သူ့အပြုအမူက ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းအနှောင့်အယှက်သဘောဖြစ်သွားတာမှမဟုတ်တာ။ သူ့ကို သတိပေးလိုက်မိသေးတယ် ကျွန်တော် ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေး ရုံးကိုသွားတိုင်လိုက်မယ်လို့ကောပေါ့နော်။
သူ တော်တော်ဒေါသထွက်သွားပုံရ သို့မဟုတ် ခံစားသွားခဲ့ရပုံပေါ်တယ်။ သူ့မျက်နှာက ရဲတွတ်နေတာကိုမြင်ရတာကိုး။ သူ ရုတ်တရက် ထရပ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ဆီ လှမ်းလာပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုသလို အတန်းထဲဆရာဝင်လာတာနဲ့ အတော်ဖြစ်သွား ရပါရော။
အဲဒီနေ့မှာပဲ ဂြိုလ်မွှေချင်တော့ Ferry Car မလာတာနဲ့ ဘတ်စ်ကားစီးပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့အိမ်က မြို့စွန်ရပ်ကွက် ဖက်ကျတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးခြံတွေ လယ်ကွက်တွေကို ဖြတ်သွားရမယ့်အနေအထားပါ အဖေက ခြံကျယ်ကျယ်နဲ့နေချင်လို့ဆိုတာကိုး။ ကားမှတ်တိုင်လေးကနေ ၁၅ မိနစ်နီးပါးတော့ အိမ်ကိုရောက်အောင်လျှောက်ရတယ်။ လိမ္မော်ပင်တွေ ၊ လိုက်ချီးပင်တွေ ၊ တိုင်းရင်း ဆေးပင်တွေဘေးက လမ်းသွယ်လေးအတိုင်း ဖြတ်သွားရင်တော့ ကျွန်တော်တို့အိမ်ခြံရဲ့နောက်ဖက်ကိုရောက်မှာမို့ရွေးမိပါရဲ့ မနက်က အိမ်နောက်ဖက်မှာ နေပူပြထားခဲ့တဲ့ နှင်းဆီပျိုးအိုးလေးတွေကြည့်ချင်လို့လေ။ ညနေဘက်ဆိုတော့ လူတော့ပြတ်သဟ…..ဒါပေမဲ့ အိမ်နဲ့မှ သိပ်မဝေးတာ…ဟူး..။
ကိုယ့်အတွေးလေးနဲ့ကိုယ်မျောရင်း လျှောက်လာတာ အစကတော့ မိုးရွာလို့စိုနေတဲ့ မြေလမ်းလေးမှာ ကိုယ့်ခြေသံကို အကျယ်ကြီးကြား ရပါလား သတိပြုမိလိုက်ပါတယ်။ ဟုတ်သေးပါဘူးဆိုပြီး နောက်ပြန်လှည့်လိုက်ချိန်မှာ တစ်ယောက်ယောက်က ကျွန်တော့်ကိုတွန်းထိုး လိုက်တာကို ခံစားလိုက်ရပြီး မြေပြင်ပေါ် ယိုင်လဲကျသွားရပါတယ်။ ကျွန်တော့်လက်တွေကော ဒူးတွေကောနာသွားရပါရဲ့။ လူးလဲထဖို့ ကြိုးစားရင်း မော့ကြည့်လိုက်တော့ ဆန်းမင်းကို ကျွန်တော့်ရှေ့မှာရပ်လျက်သားတွေ့ရသမို့ ရှော့ခ်ဖြစ်သွားရပါတယ်။ အံ့အားတသင့် ဖြစ်သွားရတာမို့ နှုတ်ဖျားက `ဟေး…ဆန်းမင်း…ဘာဖြစ်?´လို့ထွက်တဲ့စကားမဆုံးခင်မှာပဲ သူ ကျွန်တော် ဘယ်ဘက်ခြေချင်းဝတ်ကို ဆောင့်ဆွဲချလိုက်ကာ ဘယ်ဘက်ပါးကို ခပ်ပြင်းပြင်းကို လက်သီးနဲ့ထိုးချပါရော။
ကျွန်တော်အတော့်ကိုကြောက်လန့်သွားရပါတယ်။ `မထိုးပါနဲ့တော့ကွာ….ရပ် ရပ်ပါတော့´ သူ ကျွန်တော့်ကိုထပ်ထိုးဖို့ရှေ့တိုးလာတုန်း တောင်းပန်ရတာပေါ့။ လန့်တဲ့စိတ်နဲ့ ခိုက်ခိုက်တုန်လာရရင်း `လာကြပါဦး…..လာကြပါ´ အကူအညီရလိုရငြား အော်နိုင်သလောက် အော်ခေါ်မိရပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်များ လာကူညီနိုင်မလားလို့ပေါ့နော်။ နောက်ထပ်ဘာဖြစ်လာဦးမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မှ မသိ။ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျွန်တော် ဘယ်သူ့အကူအညီမှရဖို့လမ်းမမြင်ဘူး ညနေပိုင်းဆို အလုပ်သမားတွေအကုန်ရှိမှမရှိတတ် တော့တာ။
`မင်းတော်တော်ဟုတ်တဲ့ စောက်ခြောက်ပဲ!!! ငါ့လိုလူကိုများဆဲလားဆိုလားလုပ်ရဲတယ်´ ဒေါသသံနဲ့ကျွန်တော့်ကိုအော်ပြီး ထပ်ပြီး တွန်းထိုးပြန်တယ်။ မြေပြင်ပေါ် ကျွန်တော်ခပ်လွယ်လွယ်ပဲ လဲပြိုရပြန်ရော။ သူ့လိုထွားကြိုင်းလှတဲ့သူအတွက် ကျွန်တော့်ဆို လေထဲကိုတောင် အလွယ်တကူပင့်မြှောက်နိုင်တယ်လေ။ ကျွန်တော် ထရပ်ဖို့မကြိုးစားနိုင်သေးပဲ နုလုံးခုန်နှုန်းတွေ အရမ်းမြန်လာ ရပါတယ်….။
ကျွန်တော်သူ့ကို စပြီးတောင်းပန်စကားဆိုရပြီပေါ့နော် သူက လက်သီးနဲ့ထပ်ရွယ်ထားတာကိုး။ ``ငါတောင်းပန်ပါတယ်ကွာ….နာအောင် ထပ်မလုပ်ပါနဲ့တော့´။ သူ ကျွန်တော့်နံဘေးကမြေပြင်ပေါ်ထိုင်ချလိုက်ရင်း ကျွန်တော့်နားရွက်နားကပ်ကာ `မင်းကို -ိုးသတ်ပစ်မယ်ေ-ွးမ´လို့တိုးတိုးပြောတယ်ဗျ။ ကျွန်တော် အကြံအိုက်သွားရပါပြီ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တော့နားမလည်တော့ပါဘူး။
သူ ကျွန်တော့်ကျောင်းဝတ်ရှပ်အကျ င်္ီကိုဆွဲဖြုတ်တာ ကြယ်သီးတွေကအလွယ်တကူပြုတ်ကုန်ရော။ ခပ်ယိုင်ယိုင် ကျွန်တော့်လက်တွေက တားဆီးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ အရာမထင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော် Shock အကြီးအကျယ်ဖြစ်နေခဲ့ပြီး `ဆန်းမင်း….မင်းဘာလုပ်နေတာလဲ? ရပ်တော့´ မနှစ်မြို့ခြင်းနှင့် စိတ်ချောက်ချားမှုတွေနဲ့ အသံထွက်ခဲ့ရပါတယ် ဘာတွေဖြစ်နေခဲ့တာလဲပေါ့။
သူရုတ်တရက် ကျွန်တော့်ကို ပက်လက်ဖြစ်အောင်တွန်းလှဲ အပေါ်ကတက်ခွ ကျွန်တော့်လက်နှစ်ဖက်ကို ခေါင်းပေါ်ကမြေပြင်ပေါ်ကပ်နေ အောင်သူ့လက်ကြီးနဲ့ဖိတွန်းထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်မျက်နှာပြင်အနှံ့သူအနမ်းမုန်တိုင်းထန်ပါရော။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ပျို့အန် မိမတတ် ရင်ထဲကပျို့တက်လာရပါတယ်။
ဒီမြင်ကွင်းမျိုး ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ထဲမှာကြည့်ဖူးတယ်…..ယောက်ျားတစ်ယောက်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို မုဒိန်းကျင့်ကာနီး သူမလက်ကို ခေါင်းပေါ်မြှောက်ထားတဲ့အနေအထားနဲ့ စုကိုင်ခံထားရတာ….သူမအတွက် ကူကယ်ရာမဲ့ ပြီးတော့ အရှက်ကွဲခြင်း။ ကျွန်တော်သည်လည်း အဲ့ဒီ အကူအကယ်မဲ့နေတဲ့ မိန်းကလေးပါပဲ။
သူ ကျွန်တော့်နားသန်သီးကို သူအငမ်းမရနမ်းတာ ကျွန်တော့်မှာ ရွံ့စရာကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေတဖွားဖွားပေါ့။ သူက ကျွန်တော် ရုန်းကန်နေတာကို ရယ်သွမ်းသွေးလိုက်ရင်း `မင်းက ဆရာ့ကိုတိုင်ဦးမလား……..ဟား ဟား….မင်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပြရဲအောင် ငါလုပ်ပစ်မယ်´လို့ ခြိမ်းခြောက်တယ်ဗျ။
သူ့ရဲ့သန်မာတဲ့ အသက်ရှူထုတ်လေငွေ့တွေကို ကျွန်တော့်ပါးပြင်တလျှောက်နှင့် လည်တိုင်အနှံ့ခံစားရပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်လည် တိုင်ကို တရှိုက်မက်မက်နမ်းရင်း ကျွန်တော့်လက်နှစ်ဖက်ကို သူ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ထိန်း ကျန်လက်တစ်ဖက်နဲ့ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီကို ချွတ်ဖို့စလုပ်ပါရော။
ကျွန်တော် ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ရမှန်းမသိ….တော်တော့်ကို ကူကယ်ရာမဲ့နေခဲ့ပါပြီ။ သူ ထရပ်ပြီး ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီနှင့် အတွင်းခံကိုပါဆွဲ ချွတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ရုတ်တရက်ထရပ်ကာ အိမ်ရှိရာလမ်းဘက်ကိုပြေးပါရဲ့။ ကျွန်တော် သူ့လက်ကနေထွက်ပြေးဖို့ ပြီးတော့ ပုန်းကွယ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ် အောင်မြင်လား…အ….သူက ပိုပြီးလျှင်မြန်သလို ကျွန်တော့်ကိုဖမ်းဖို့စွမ်းအင်ကလည်များသား။ သူ ကျွန်တော့်ကို ဆွဲဖက်ပြီး ကျွန်တော့်အကျ င်္ီကို ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ကျွန်တော့်တကိုယ်လုံးလဲ အ၀တ်မဲ့သွားရောပေါ့ဗျာ။
အခုအိမ်နောက်ဖက်နားက မြက်ပင်ရှည်တွေကြားထဲ တိုးဝင်မိပြီးသားဖြစ်သွားရသလို ပိုပြီးစိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်လာရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရူးနှမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်တာပဲ။ သူ ကျွန်တော့်ကို မထိုးနှက် မရိုက်ပုတ်ခင် လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာ။
သူ ကျွန်တော့် -ိင်တန်ဆာကိုကြည့်ပြီး ရယ်ပါတော့တယ်….သိပ်ထွားတဲ့အထဲမှာပါမှမပါတာပဲလေ။
သူမြက်ခင်းပေါ်ကျွန်တော့်ကို တွန်းဖက်ထားတယ်။ ကျွန်တော့်လက်အစုံကို ချုပ်ကိုင်ထားရင်း အနမ်းမုန်တိုင်းထန်ပြန်ပေါ့တစ်ခါ။ ဘာကြောင့်လဲမသိ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ အတော့်ကိုမာတောင့်လာတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့်နားရွက်နားကပ်ခါ `မင်း ငါ့-ီးကိုကြည့်မလား?´ပြောပြီး ပါးကိုတရွှတ်ရွှတ်နမ်းပါ၏။ `ကြည့်´ သူ ကျွန်တော့်ကိုခွထိုင်ထားရာက ပြန်မတ်လိုက်ပြီးနောက် သူ့ဘောင်းဘီ ဇစ်ကိုဖွင့် လက်တွေကိုလျှိုထည့်လိုက်ပြီးသကာလ ပစ္စည်းကြီးကိုစွဲထုတ်ပါတော့တယ်။
WOWwwww!! အနည်းဆုံး ၆လက်မလောက်တော့ရှိမယ် အသားချောင်းကြီးက။ ဘာမှန်းမသိဘူး အဲဒါကိုမြင်ပြီး ကျွန်တော့်ငပဲက ပိုပိုမာလာတယ်။ သူကအသားဖြူတာကြောင့် သူ့ပစ္စည်းက ပန်းသွေးရောင်ကိုထလို့ပါ။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေက ဘာဖြစ်လာလဲမသိဘူး နည်းနည်းထူးဆန်းတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်တည်လာတယ်။ ဒီကောင့်ကို ကျွန်တော်မုန်းနေတာလေ…..အခု ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်နေတယ် ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ မေ့လျော့ကုန်ပြီဗျ။
သူ ကျွန်တော့်ဆံပင်ကိုဆွဲပြီး ဒူးထောက်အနေအထား ထထိုင်စေပါတယ်….ပြီးတော့ သူ့ဘောင်းဘီကို ဒူးထိဆွဲချလိုက်ကာ ကြီးမားထွားကြိုင်းလှသည့် သူ့ရွှေဥနဲ့ ဆီးစပ်ကအမွှေးနုတွေကိုရှင်းကနဲမြင်စေပါရော။ ဒီလောက်ထွားတာ ကျွန်တော်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးခဲ့။ ကျွန်တော့်ဆီးစပ်တွင်မတော့ အမွှေးနုအနည်းငယ်သာရှိပါတယ်။
`အာ…မ-ုပ်ဘူး´ ကျွန်တော်အော်လည်းအော် အဝေးကိုထွက်ပြေးဖို့လည်းကြိုးစားပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်ကို ဆွဲထိန်းပြန်ရော…. ဆံပင်တွေကိုဆောင့်ဆွဲတာများ ကျွတ်ထွက်သွားမလားခံစားရပါတယ်။ နာလွန်းလို့ပါးစပ်ကို ဟပြီးအော်ဟစ်မိပါရဲ့။ သူ့ရဲ့အသားနု တစ်ခုလုံးကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲအလိုက်သင့်အမြန်ထည့်ပါတယ်။ ``မင်းငါ့ပစ္စည်းကိုကိုက်ဖို့ကြိုးစားရင်….မင်းဥတွေကိုဖြတ်ပြီး မင်းပြန်ကျွေးပစ်မယ်! ငါပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီး ငါ့-ီးကို-ုပ်စမ်း´´ အမိန့်သံကခပ်ပြင်းပြင်းပါ။
ကျွန်တော် မျက်လုံးတွေကိုမှိတ် အသက်ကိုရှူတာကိုအောင့် သူ့ပစ္စည်းကို Lollypop တစ်ခုလိုစပြီး-ုပ်ရပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး ကျွန်တော် မလုပ်နိုင်။ သူ ကျွန်တော့် ဦးခေါင်းကိုဆွဲကိုင်ပြီး ဖိဖိသွင်းတာ သူ့ဆီးစပ်က အမွှေးနုများနှင့် ကျွန်တော့်နှာခေါင်းတွေထိတွေ့တဲ့အထိပါ။ အသက်ရှူအောင့်ထားတာကို တစ်ချက်လွှတ်လွှတ်မိလိုက်ချိန်မတော့ သူ့ဆီးစပ်အမွှေးနုများဆီက အနံ့တစ်ချို့ရပါတယ်။ သူ့ပစ္စည်းက ပိုပိုမာလာသလို ပြီးတော့ရနေတဲ့အနံ့တစ်ချို့ကြောင့် ကျွန်တော့်စိတ်တွေက လိုက်လိုက်လျောလျောဖြစ်စပြုလာကာ ပါးစပ်ကို အလိုက်သင့် လှုပ်ရှားပေးနေမိပါရော။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်-ုပ်ဖို့တော့ ခဲယဉ်းပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့ပစ္စည်းကိုအထဲ ရောက်ဖို့ကိုသာသူကြိုးစားပြီး ဖိဖိသွင်းနေတာကိုး။ ငါးမိနစ်ခြောက်မိနစ်လောက် ကျွန်တော်သူ့ကိုပြုစုပေးပြီးနောက် မာတောင့်နေဆဲ သူ့ပစ္စည်းကို ပါးစပ်ထဲကနေဆွဲထုတ်သွားတယ်။
သူ ကျွန်တော့်ကို ပြန်တွန်းလှဲပြီး မြက်ခင်းပေါ်မှာ မှောက်လျက်အနေအထားဖြစ်အောင်လုပ်စေပါတယ်။ သူ ခပ်မြန်မြန် ကျွန်တော့်နောက် က တက်ဖိကာ သူ့ပစ္စည်းကို ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံထဲရောက်ဖို့အရေး သူအားနဲ့အင်နဲ့ကြိုးစားပါရော။ ကျွန်တော့်ရဲ့ငပဲမှာလည်း မြက်ခင်းနဲ့ အတူ မြေသားမာမာများနှင့်ထိခိုက်မိတာကြောင့် နာကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရပါတယ်။ ကျွန်တော် နာကျင်မှုကြောင့် ပါးစပ်က အော်ညည်း မိတာပေါ့နော်။ သူ ကျွန်တော့်အောက်ပိုင်းကို မလှုပ်နိုင်အောင်ချုပ် ပြီးတော့ သူ့ပစ္စည်းခပ်မာမာနှင့် ကျွန်တော့်တင်ပါးနှစ်ကြားထဲကို စပြီး ပွတ်သပ်ပါတယ်။ အိုးမိုင့်……တင်ပါးအက်ကွဲကြောင်းထဲ သူကလိနေတာ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲဘယ်လိုမှန်းမသိ မရိုးမရွနဲ့ …အ….သူ ကျွန်တော့် လည်တိုင်တွေ ဂုတ်သားတွေကို တပြွတ်ပြွတ်နမ်းရင်းလည်း သူ့ငပဲနဲ့ ကျွန်တော့်ခရေကို နောက်ကနေထိထိပြီးဆွနေတာပါ။ မာတောင့်လာတဲ့ ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းလေးတွေဟာလည်း နောက်ကနေသူ့တက်ဖိထားမှုကြောင့် မြက်တွေနဲ့ပွတ်ရှမိတာကြောင့် ကျွန်တော့် နှုတ်ဖျားကနေ မအောင့်နိုင်အော်ညည်းမိတဲ့အထိပါပဲ။
သူ နောက်ကိုနည်းနည်းပြန်ရို့သွားပြီး ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်တွေကို လက်ဝါးတွေနဲ့ ခပ်ပြင်းပြင်းရိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် နာကျင်မှု ကြောင့် အော်မိပေမဲ့ ကြက်သီးများလည်း တဖြင်းဖြင်းထမိသား။ လေးငါးချက်လောက် တင်ပါးတစ်ဖက်ဆီ အရိုက်ခံရပြီးနောက် တင်သား တွေဟာ မီးလောင်တဲ့အတိုင်း ပူစပ်နေရော။
နောက်တော့ ကျွန်တော့်ခရေ၀မှာ စိုစွတ်မှုကိုခံစားရပါတယ် သူဘာတွေကိုချောဆီအဖြစ်သုတ်လိမ်းပါလိမ့်။ တင်သားဆိုင်တွေကို သူ့ လက်ကြမ်းကြီးနဲ့ အသာဖြဲပြီး -ီးကြီးကိုဖိသွင်းပါတယ်။ ကျွန်တော် နာကျင်မှုကြောင့် အော်ဟစ်မိရချိန်မှာ သူ့ပစ္စည်းကို လက်မ အနည်းငယ်လောက်တော့ ၀င်အောင်ကြိုးစားထားရဲ့။ တစ်ခုလုံးပြည့်ပြီး ထုံနေသလိုခံစားရပါတယ်။ သူ တစ်စက္ကန့် နှစ်စက္ကန့်လောက် ခဏစောင့်နေပြီးနောက် -ီးကိုပြန်ဆွဲထုတ်သွားပါတယ်။
အိုး….အကျဉ်းအကြပ်တစ်ခုထဲကနေ လွတ်မြောက်သွားသလိုပါပဲ….ခပ်မာမာပစ္စည်းတစ်ခု တဖြေးဖြေး ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲကဆွဲထုတ် သွားတာကိုခံစားရတာ။ ဒါပေမဲ့ ခဏပါပဲ…တစ်စက္ကန့်လောက် ကျွန်တော့်တင်သားတွေကို ဖျစ်ညှစ်လိုက်ပြီးနောက် ခရေ၀ကို အသာဖြဲပြီး သူ့ဖာသာ ဖိသွင်းပါတော့တယ် အထဲကိုပိုပိုရောင်အောင်ပေါ့။ အာ…..သူ့ရဲ့ ရှည်လျားပြီး တုတ်ခိုင်လှတဲ့ ငပဲကြီး ကျွန်တော့်-င်ထဲ နစ်မြုပ် ကာ ဘာကိုသွားသွားထိပြီး ကလိနေတယ်မသိဘူး ကျွန်တော့်စိတ်တွေကို အစွမ်းကုန်မရိုးမရွဖြစ်စေပါတော့တယ်။ ခပ်ဖြေးဖြေးသူ့ဟာကို ဆောင့်ဆောင့်သွင်းလိုက်တိုင်း ကျွန်တော်မအော်ဟစ်မိတော့ဘဲ ညည်းညူမိပါတယ် မရှက်မိတော့။ ပြန်ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက် ဖိဖိသွင်းလိုက် ၉ကြိမ်လောက်သူလုပ်အပြီးမှာတော့ သူ ကျွန်တော့်ကို နောက်ကနေ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်တွယ်ထားကာ သူ့ပစ္စည်းကိုအတွင်းထဲ ရောက်အောင်ဖိထားပြီးမွှေပါတယ် တင်ပါးတွေကိုဝိုက်ဝိုက်လှဲ့ပြီး။
"AAAAHHHHH´ ကျွန်တော် မသိတော့ဘူး နှုတ်ဖျားကနေ မိန့်မူးသံတွေအော်ညည်းမိပြီ။ ရှက်လည်း မရှက်မိတော့ဘူး။ မုန်းတီးစိတ် တွေပျောက်ပြီး ဆန်းမင်းအပေါ်နှစ်လိုစိတ်တွေဝင်လာသလားပဲ။ ``ငါ…ငါ…..မင်းကိုကြိုက်သွားပြီ….ဆန်းမင်း…..Fuck me´´ ညည်းသံ တွေက တအင့်အင့်ပေါ့။
ယောက်ျားဆန်တဲ့ သူ့စရိုက်လက္ခဏာတွေအပေါ် ကျွန်တော်အညံ့ခံခဲ့ရပြီ….. ကျွန်တော် ကျွန်တော်သူ့ကိုပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ ခံစားရတယ် ….သူ့ပစ္စည်း ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်ထဲမှာမြုပ်နေတော့ တကယ့်ပြည့်စုံတယ်။ သူ ကျွန်တော့် ပါးပြင်ကို တရှိုက်မက်မက် ခပ်ပြင်းပြင်းနမ်းတယ်၊ ကျွန်တော့် နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ညှစ်တယ်။ ကျွန်တော် မအော်မိတော့….ဒီတစ်ခါသူပေးတဲ့ နာကျင်မှုတွေထဲ သာယာနေမိပြီ။
"aahhhh .." သူနှုတ်ဖျားက အော်ညည်းသံလေးတွေထွက်လာတယ်….ခရေ၀ထဲသူ့ပစ္စည်းကိုဖိဖိသွင်းရင်း…တရှီးရှီး ဖြစ်လာ ညည်းညူလာတယ်။ သူ ကျွန်တော့်တင်သားနှစ်ဖက်ထဲ ထိုးထိုးခွဲနေတာပဲ အသားဆိုင်တစ်ခုနဲ့ပေါ့။ သူ ကျွန်တော့်ငပဲနှင့် ရွှေဥကို လက်ဝါးကြီးနဲ့ပွတ်သပ်ဖိကိုင်တယ်….ကျွန်တော် မြက်ပင်တွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ပြီး မိန့်မူးရလောက်အောင်ပါပဲ… သူ ကျွန်တော့်ပစ္စည်းကို အားရပါးရကိုင်ပြီး အထက်အောက်လက်ကစားပေးတာကမိုက်တယ်။
သူ ကျွန်တော့်ငပဲ ခပ်သေးသေးကို သူ့လက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ကာ ကစားပေးတယ်။ မျက်ဝန်းလေးတွေမှိတ် သူပေးတဲ့ သာယာမှုကိုခံစားမိပြီ ပေါ့။ မိနစ်တိုင်း မိနစ်တိုင်း နှိုးဆွမှုအမျိုးမျိုးခံစားရသလိုမျိုးပဲ။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အသံတွေကလည်း ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်တွေနဲ့ သူ့ဆီးစပ်နှင့် ရိုက်ခတ်လိုက်တိုင်း ကြည့်ဖူးသမျှ အပြာကားတွေထဲက အသံတွေနဲ့ထပ်တူပါ။ သူ့အနမ်းမိုးတွေကလည်း ကျွန်တော့် လည်တိုင်နဲ့ ပါးပြင်အနှံ့မပြတ်စေရပါဘူး။ ကျွန်တော့်ငပဲကိုသူပွတ်သပ်ဆော့ကစားလိုက်တိုင်း နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ဖျစ်ညှစ်လိုက် တိုင်း ပိုပိုကောင်းတဲ့ မိနစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်လာရပါတယ်။
သူ့ခြေလှမ်းတွေ ပိုပိုတိုးတက်လာသလို ကျွန်တော့်နားရွက်နားကပ်ကာ `ငါ ပြီးတော့မယ်….အာ…..ငါ ထွက်တော့မယ်….. မင်းမျက်နှာနဲ့ ရင်ဘတ်တွေပေါ် ပန်းထုတ်ချင်တယ်…အာ´တဲ့ပြောပါတယ်။ သူ လှုပ်ရှားနေတာကိုရပ် မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ကို အမိန့် ပေးပါပြီ။ `ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်…..ဒူးထောက်´
ကျွန်တော်လည်း ထပြီး ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်တယ်သူ့ရှေ့မှာပေါ့။ သူက မာတောင့်နေဆဲ ကျွန်တော့်ငပဲပေါ်ကို တံတွေးထွေးချ လိုက်ရင်း `မင်းလည်း -ုလေ´တဲ့။
ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်ငပဲကိုအားရပါးရကိုင်ပြီး လှုပ်ရှားသလို သူသည်လည်း သူ့ပစ္စည်းကိုကိုင်ပြီးကစားကြပါတယ်။ ကျွန်တော် မျက်နှာအနားမှာ ကြီးမားထွားကြိုင်းတဲ့ ငပဲကြီးကို အံ့အားတသင့်ငေးမောနေရပါရဲ့။ ဒီလောက်ကြီးတဲ့ ပစ္စည်းကြီးကို ကျွန်တော့် ခရေ၀ သေးသေးလေးနဲ့ ဘယ်လိုများကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့ပါလိမ့်နော်။ သူ့ဆီးခုံကြွက်သားတွေ တတွန့်တွန့်လှုပ်ရှားမှုတွေမြင်လိုက်ရပြီးနောက်မှာ ကျွန်တော့်မျက်နှာပေါ်ကို ပူနွေးတဲ့ သူ့သုက်ရည်တွေပန်းထုတ်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ့်ငပဲကို ကိုင်ပြီးကစားနေတာကိုရပ် ပါးစပ်လေးကိုဟကာဖွင့်ရင်း ပူနွေးချွဲပစ်တဲ့သူ့သုက်ရည်တွေ စီးဆင်းလာတာကို လျှာလေးနဲ့တို့ကာအရသာခံမိရပါပြီ။ ပျစ်ချွဲနေတဲ့ အရည်တွေများစွာ ဟာ ကျွန်တော့်မျက်နှာ…ရင်အုပ်အနှံ့စီးဆင်းကြချိန်မှာ ကျွန်တော့်ငပဲနဲ့ ရွှေဥတွေဟာလည်း ဒိုးဒိုးဒွန့်ဒွန့်ဖြစ်ကာ နေပါရဲ့။ ဘယ်ဘက်မျက်စိက ပူကနဲစပ်သွားတာကြောင့် ညာဘက်မျက်စိနဲ့စူးစမ်းကြည့်လိုက်တာ အရည်နည်းနည်းဝင်သွားတာကိုး။ ဘယ်ဘက်မျက်ဝန်းကိုအသာမှိတ် ညာဘက်မျက်ဝန်းလေးဖြင့် သုက်ရည်မိုးချိုးပြီး ပကတိအခြေအနေ ကိုစမ်းစစ်ကြည့်တာမှာ ကျွန်တော့် ရင်အုပ်တလျှောက် နို့သီးခေါင်းလေးတွေတလျှောက် ပြီးတော့ ဗိုက်သားတွေထိတိုင် သူ့သုက်ရည်တွေ စီးဆင်းကျနေတာကိုမြင် ရပါတယ်။
ညဘက်လက်ကလေးနဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကိုဆုပ်ကိုင်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစွာဆော့ကစားမိသလို တခြားလက်ဖြင့် မျက်နှာပေါ်က သုက်ရည်တွေ ကို သုတ်ပြီး ဘယ်လိုအရသာရှိလဲ လျှာနဲ့တို့ထိစမ်းသပ်ပါတယ်။ မာတောင့်နေဆဲ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ပွတ်သပ်ဖိနှိပ်မိသလို ရင်အုပ် နဲ့ ဗိုက်သားပြင်ပေါ်က သုက်ရည်တွေကို သရပ်မိပါရဲ့။ သူ့သုက်ရည်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး ကျွန်တော့်ငပဲကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးကစားရတာ ချောဆီ သုတ်လိမ်းထားရသလိုပါပဲ။
ဆန်မင်းက သရော်ပြုံးနဲ့ ကျွန်တော့်လှုပ်ရှားသမျှကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ပါးစပ်ကိုကျယ်ကျယ်ဖွင့် မိန့်မူးသံတွေ အော်ညည်းရင်း ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ် သုက်ရည်တွေကိုပန်းထုတ်လိုက်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဆန်းမင်းကို မနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်က သုက်ရည်နည်းနည်းလေးပဲထွက်ပြီး သူကတော့ မိုးရွာသလို ရွှဲနေအောင် ပန်းထုတ်ခဲ့တာကိုးနော်။
ကျွန်တော်မြင်ပင်များခင်းထားတဲ့ မြေပြင်ပေါ်ပြိုလဲသွားချိန်မှာ ဆန်းမင်းကတော့ အဲ့ဒီသရော်ပြုံးနဲ့ကြည့်နေဆဲပါ။ သူဟာ ကျွန်တော့်ရန်သူ ဆိုတာ ကျွန်တော်မေ့သွားရပြီး သူ့ကိုပြန်ပြုံးလိုက်မိသလိုပါပဲ ရောင်ရမ်းပြီး။
သူ ကျွန်တော့်အ၀တ်တွေကို သွားကောက်ယူပြီး ကျွန်တော့်မျက်နှာဆီပစ်ပြီးပေးပါတယ်။ ကျွန်တော် ညစ်ပေနေတဲ့ အ၀တ်တွေကို ၀တ်ပြီး အဝေးကိုမထွက်ခွာဘဲသူ့အနားကိုသွားမိရပါတယ်။ သူ့သုက်ရည်စီးကပ်ကပ်တွေဟာ ကျွန်တော့်မျက်နှာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိဆဲပါ။ ကျွန်တော်….ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားကနေ `မင်း…မင်းနဲ့ တည့်အောင်မနေမိတာ ငါတောင်းပန်ပါတယ်ကွာ….အခုအချိန်ကစပြီး မင်းပြောသမျှကို ငါလိုက်နာပါ့မယ်´လို့ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်းထရင်းပြောမိလိုက်ပါတယ်။
ဆန်းမင်း သူ့မျက်လုံးများကို ခပ်ကျယ်ကျယ်ပြူးလိုက်ရင်း `မင်း…ငါ့တပည့်လုပ်မှာလား´
တစ်စက္ကန့်လောက်ပဲ ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ပြီး ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ `အေး….ငါမင်းနဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အရသာကိုကြိုက်သွားပြီ….ငါ … ငါတောင်းပန်ပါတယ်ကွာ´
`မင်း ငါ့တပည့်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုသိတယ်နော်? ငါဘာပဲပြောပြောမင်းလိုက်နာရမှာ…ပြီးတော့ ငါလုပ်ချင်တဲ့အချိန်တိုင်း မင်း-င် ကိုအသင့်ပြင်ထား လက်ခံဖို့´ သူက ခပ်ထန်ထန်ဆိုတယ်။
`မင်း ငါ့-ရည်နဲ့ တံတွေးတွေကို မျိုဖို့အသင့်ပြင်ထား´
`ငါ မင်းကို စိတ်တို စိတ်ဆိုးတဲ့အခါ မင်းတင်ပါးတွေ ရဲနေအောင်ရိုက်ပြီး အပစ်ပေးခံရမယ်ကြားလား….တင်ပါးတွေ နာသထက်နာ သွားမယ် ဟွန်း´
`ကြိုက်သလိုလုပ်ပါ ဆန်းမင်း…..ငါ..ငါ မင်းပိုင်ပစ္စည်းပါကွာ´ ကျွန်တော် ရင်ခုန်စွာ ပြန်ပြောလိုက်မိပါတယ်။
သူ့မျက်နှာမှာ နှစ်လိုအားရပြုံးလိုက်တဲ့အပြုံးပေါ်လာပြီး ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို တစ်ချက်ပုတ်လိုက်ကာ ကျွန်တော်နဲ့သူ လမ်းခွဲလိုက် ကြပါတယ်။ အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့ လမ်းတလျှောက် အိမ်ကိုဘယ်လိုပြန်ပြောရမလဲ တကိုယ်လုံး ညစ်ပေစုတ်ပြတ်ပြီးပွနေတဲ့အ၀တ်အစား တွေဝတ်ပြီးပြန်လာတာကိုလေ။ `ဟင်း….´
အဲဒီအချိန်နေ့ရက်တွေကစပြီး ကျွန်တော် သူ့ကျွန်တစ်ယောက်လို တပည့်တစ်ယောက်လို အလုပ်အကျွေးပြုတော့တာပဲ။ တခြားလူတွေ တခြားကျောင်းသားတွေနဲ့ ဘယ်လိုပြဿနာဖြစ်ဖြစ် ဒေါသဘယ်လောက်ထွက်ထွက် ဆန်းမင်းတစ်ယောက် ကျွန်တော့်အပေါ်ဆက်ဆံ တာကျတော့ နုညံ့ချိုသာနေတာကို ကျောင်းကအတန်းဖော်တွေအတော်များများ အံ့အားတသင့်သိချင်နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့အိမ်စာတွေ ကျောင်းစာတွေကို ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးဖြစ်ပါရဲ့။
နေ့ရက်တိုင်းရဲ့ ညနေတိုင်းမှာ ကျွန်တော့်အိမ်နဲ့ မလှမ်းမကမ်းက မြက်ခင်းထူထူထဲမှာ နှစ်ယောက်သားလူးလိမ့်ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော် သူပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်ရတာကို သဘောကျတယ်……သူ့အမိန့်ကိုနာခံရတာ…သူ့ပါဝါတွေ ကျွန်တော့်အပေါ်လွှမ်းမိုးနေတာကို နှစ်လိုသဘောကျတယ်…..ပြီးတော့…ထွားကြိုင်းသန်မာလှတဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ထွေးဖက်မှုကိုစွဲလမ်းတယ်။
Alex Aung (9 May 2014)